ထား၀ယ်မြို့. (မှ) ရှင်ကိုးရှင် – discoverinmyanmar
Discover beautiful places in Myanmar
ထား၀ယ်မြို့. (မှ) ရှင်ကိုးရှင်
January 22, 2020 January 22, 2020 adminUncategorized0 Comments
ထား၀ယ်မြို့. (မှ) ရှင်ကိုးရှင် ဆိုသည်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များ အများအပြား ထွက်လေ့ရှိသည့် ရှင်ကိုးရှင်သည် သမိုင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက်အထားများ နည်းပါးသော်လည်း အစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့မှုများကြောင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ရှင်ကိုးရှင်သို့ ရန်ကုန်မြို့မှ မော်တော်ကားလမ်းအတိုင်း ၃၉၁ မိုင်ကွာဝေးကာ မော်တော်ကား၊သင်္ဘော၊ မီးရထား၊ လေယာဉ် တို့ဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည့် ထား၀ယ်မြို့မှ တစ်ဆင့် သွားရောက်ကြရသည်။ ထား၀ယ်မြို့သည် မုတ္တမပင်လယ်အော်မှ ၁၈ ဒသမ ၆ မိုင်ကွာဝေးပြီး ထား၀ယ်မြစ်၏ မြောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
ရှင်ကိုးရှင်တွင် ရှင်ပင်ခရု၊ရှင်မုတ္ထီး၊ရှင်ဥသြနှင့်ရှင်ဓာတ်ဝဲတို့သည် ထား၀ယ်မြို့နယ်၊ ရှင်မျှော်တောင်၊ရှင်တောက်ထိန်နှင့်ရှင်ဇလွန်တို့သည် လောင်းလုံ မြို့နယ်၊ ရှင်တောင့်ပုံသည်သရက်ချောင်းမြို့နယ်နှင့် ရှင်ဆံတော်သည်ရေဖြူမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ရှင်ကိုးရှင်ကို တည်ရှိသည့်အနေအထားအရ တောင်သုံးတောင်၊တောသုံးတော၊မြို့သုံးဆူဟု အမှတ်အသားပြုကြသည်။တောင် သုံးတောင် ရှင်များသည် ရှင်ဆံတော်၊ရှင်မျှော်တောင်နှင့်ရှင်တောင့်ပုံတို့ဖြစ်ကြပြီး တောသုံးတော ရှင်များမှာ ရှင်ဓာတ်ဝဲ၊ ရှင်ဇလွန် နှင့် ရှင်တောက်ထိန်ဖြစ်သည်။ရှင်ပင်ခရု၊ရှင်ဥသြနှင့်ရှင်မုတ္ထီးတို့သည် မြို့ဘုရားများဖြစ်ကြပြီး `ဟေမာဂီရိ၊ မြို့တြိ၊ မှတ်ဘိ ရှင်ကိုးရှင် `ဟု မှတ်သားခဲ့ကြသည်။
ထား၀ယ်မြို့၊ကရင်ပြင်တောင်ရပ်ကွက်၊ အာဇာနည်လမ်းတွင်တည်ရှိသည့် ရှင်ပင်ခရုစေတီတော်ကိ်ု လွန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀၀ က တည်ထားခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ရှင်ပင်ခရု စေတီတော်ကို ခရေပင်ကြီးနှစ်ပင်အကြား၌ပေါ်လာသည့် အလွန်ကြီးမားသော ခရုကြီး၏ အခွံပေါ်တွင် တည်ခဲ့သည် ဟုအဆိုရှိခဲ့သည်။ ထား၀ယ်ဒေသတွင် ခရေပင်ကို ရှားပင်ဟုခေါ်ဆိုကြကာ ရှားပင်နှစ်ပင်နှင့်ခရုပေါ်မှဘုရားဟူသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် ရှား ပင်ခရုဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြရာမှ ရှင်ပင်ခရုဟု အမည်တွင်ခဲ့ကြောင်း အစဉ်အဆက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် သမိုင်းပညာရှင် ဆရာ မောင်သန်း ဆွေ (ထား၀ယ်)က ရှင် ဟူသည့် အမည်သည် ဘုရားကို ရည်ညွှန်းသည့် စကားလုံးဖြစ်သဖြင့် ရှင်ပင်ခရုသည် ခရေပင် နှစ်ပင် အကြားရှိ ခရု ပေါ်တွင်တည်ထားသည့် ဘုရားဟု ယူဆပါက ပိုမိုဆီလျော်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မတ် ၂၆ ရက်နေ့က ထား၀ယ်မြို့၊ကရင်ပြင်(တောင်)ရပ်ကွက်တစ်ကွက်လုံးနီးပါး မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရာ ရှင်ပင်ခရု စေတီတော်သည် မီးမလောင်ဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သဖြင့် ပိုမို ထင်ရှားလာခဲ့သည်။
ထား၀ယ်မြို့မှ ခြောက်မိုင်ကွာဝေးသည့် ရှင်မုတ္ထီးရွာသည် မုတ္တသုနခဂရမြို့မှ ရှင်မုတ္ထီးဟုအမည်တွင်ခဲ့ကြောင်း ယူဆကြသည်။ ထား၀ယ် မြိတ်မော်တော်ကားလမ်း၏ ယာဘက်ရှိ ရှင်မုတ္ထီးရွာတွင်တည်ရှိသည့် စေတီတော်တွင် ရှင်မုတ္ထီးရုပ်ပွားတော်ကို ဌာပနာ ထည့် သွင်းခဲ့သည်။ ရှင်မုတ္ထီးရုပ်ပွားတော်သည် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ ရဟန္တာအရှင်မဟာအရဟံက ပင်လယ်တွင်းသို့မျှောခဲ့သည့် ရုပ်ပွားတော် လေးဆူ အနက် တစ်ဆူဖြစ်ပြီး ကျန်သုံးဆူမှာ ပုသိမ်မြို့ရှိ ရှင်မုဋ္ဌော ဘုရား၊ ကျိုက်ထိုမြို့မှ ကျိုက်ပေါလောမှည့်ရှင်ဘုရားနှင့်ကျိုက္ခမီရေလယ် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း အဆိုရှိခဲ့သည်။ရှင်မုတ္ထီးရုပ်ပွားတော်ကို ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည့်နေရာသည် စေတီတော်၏အနောက် ဘက်မြစ်ကမ်း အနီး ဖြစ်ပြီး ထိုနေရာတွင် ရုပ်ပွားတော်ကို ဆယ်ယူခဲ့သည် ဆိုသည့် သီလရှင်ရုပ်ထုကို ထားရှိသည်။
ခရစ်နှစ် ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် တနင်္သာရီ တိုင်းမင်းကြီး မစ္စတာအိပ်ခ်ျအမ် စတီဗင်ဆင်သည် ရှင်မုတ္ထီးစေတီအနီးမှ မြေအုတ်ခွက် ၃၀၀ ကို ရရှိခဲ့သည်။အုတ်ခွက်ဘုရားအချို့၏ ကျောဘက်တွင် ရှေးဟောင်း မွန်ကမ္ဗည်းစာများ ရေးသားထားသည့်အနက် သ္မိင်သြီတြိ ဘော၀နာဒိတျ သည် မြန်မာဘာသာဖြင့် သီရိတြိဘု၀နာဒိတျဓမ္မရာဇာဖြစ်ပြီး ပုဂံ ပြည့်ရှင် ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ ဘွဲ့တော်ဖြစ်သည်။ ထား၀ယ်ကို ပုဂံခေတ်က ထဝါယ်၊ဒဝါယ် ဟုရေးသားခဲ့ကြပြီး အုတ်ခွက်ကမ္ဗည်းစာတွင်ပါရှိသော ထား၀ယ်မြို့ကို အုပ်ချုပ်သူ ဓမ္မရာဇ် သမ္ဗေင်အနန္တဇေယျ (သံဗျင်အနန္တဇေယျ)သည် ကျန်စစ်သားမင်းကြီး၏ သစ္စာတော်ခံဖြစ်သည်။မြန်မာသက္ကရာဇ် ၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ထား၀ယ်မြို့စားသူရိယကုမ္မာသမီးမောင်နှံသည် ကြေးချိန်ပိဿာ ၁၀၀ ရှိသည့် ကြေးခေါင်းလောင်းကို ရှင်မုတ္ထီးစေတီသို့ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ပေ ၂၀၀၀ ကျော်အမြင့်ရှိသည့် တောင်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ထားသည့် ရှင်တောင့်ပုံစေတီသည် ထား၀ယ်မြို့မှ ၁၈ မိုင်ကွာ ဝေးပြီး သရက်ချောင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ တောင့်ပုံသည် မြားပုံး၊ မြားပလုံး၊မြားကျည်တောက်များစုပုံထားသည့်နေရာဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ တောမုဆိုးမောင်နွားသည် ရှင်တောင့်ပုံစေတီတော် ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် မုဆိုးဘ၀ကို စွန့်၍ သူ၏ မုဆိုးအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများကို စုပုံ မီးရှို့ပြီး ရှင်ဂေါဝိန္ဒအမည်ဖြင့် ရသေ့၀တ်ခဲ့ကာ ရှင်တောင့်ပုံစေတီကို တည်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ရှင်တောင့်ပုံစေတီကို ပျူခေတ် သို့မဟုတ် ပုဂံခေတ်ဦးပိုင်းလက်ရာဟု ဆိုကြသော်လည်း ခိုင်မာသော အထောက်အထားများ မတွေ့ရှိရသေးပါချေ။
လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရှင်မျှော်တောင်ဘုရားသည် တောင်ပေါ်စေတီတစ်ဆူဖြစ်ပြီး ထား၀ယ်မြို့မှ ၅၂ မိုင်ကွာဝေးသည့် ကြက်လွှတ် ကျေးရွာတွင်တည်ရှိသည်။ဘုရားသမိုင်းများအဆိုအရသက္ကရာဇ် ၂၃၈ ခုနှစ်၊တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင်ရှင်မျှော်တောင်စေတီကို တည်ထားခဲ့ပြီး ပုဂံဘုရင်များဖြစ်ခဲ့ကြသည့် အလောင်းစည်သူမင်းနှင့်နရပတိစည်သူမင်းတို့လာရောက်ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
ပင်လယ်ရေတက်ချိန်တွင် ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့် အတန်ငယ်လှမ်းသည့် နေရာရှိ ကျောက်တုံးကြီး တစ်တုံးပေါ်တွင် တည်ထား သော စေတီငယ်အနီးမှ ရေပြင်သည် ဒယ်အိုးကဲ့သို့ဖြစ်လာကာ စေတီကို ရေလွှမ်းမိုးရှိခြင်းမရှိချေ။
ရှင်မျှော်တောင်အောက်၊အုတ်စင်မြောက်စခန်းတွင်ရှိသည့် ရေအိုင်ငယ်သည် ပင်လယ်ဒီရေတက်ချိန်တွင် ဆားငန်ရေများ ၀င် ရောက်လေ့ရှိသော်လည်း ဒီရေကျသွားချိန်တွင် ရေချိုအိုင်အဖြစ်သာတည်ရှိနေသည်ဟုဆိုသည်။ရှင်မျှော်တော်၏ အံ့ဖွယ်ခြောက်ဖြာ ကိုလည်း ဘုရားသမိုင်းစာအုပ်များတွင် ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။
ထား၀ယ်ခရိုင်၊လောင်းလုံမြို့နယ်၊ကမြောကင်းကျေးရွာတွင် တည်ရှိသည့် ရှင်တောက်ထိန်စေတီကို ရှင်ကိုးရှင်တစ်ဆူဟု ဆိုကြ သော်လည်း မူလရှင်တောက်ထိန်ဘုရားသည် စေတီတော် အရှေ့ဘက်သိမ်အတွင်းရှိ တ၀ဂူတွင်ကိန်း၀ပ်စံပယ်နေသော ရုပ်ပွားတော်ဖြစ် သည်။ရှင်တောက်ထိန်ကို ဓာတ်ဘုရားဟုလည်း ခေါ်ကြပြီး နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တိုင်း ဆွမ်းတော်ကြီးတင်ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိ သည်။
ထား၀ယ်မြို့၊ပိန္နဲတောရပ်ကွက်၊ ရွှေကျောင်းကြီး၀င်းအတွင်း၌ တည်ရှိသော ရှင်ဥသြစေတီ သည်ဖောင်းရစ် ၁၁ ရစ်ရှိသဖြင့်တည် ဆောက်ပုံ ထူးခြားသော စေတီတစ်ဆူဖြစ်သည်။ရွှေတောင်စားမင်း၊ မင်းရှင်ဇော်သည် သက္ကရာဇ် ၁၁၂၂ ခုနှစ်တွင် ပိန္နဲတောရပ်တွင် ရွှေကျောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်၍ နန်းစံခဲ့ကာ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၂ ခုနှစ်တွင် နန်းဦးစေတီအဖြစ် ရှင်ဥသြစေတီကို တည်ခဲ့သည်။မင်းရှင်ဇော် သည် ရွှေဥသြစေတီကိုတည်အပြီး နှစ် နှစ် အကြာတွင် ရွှေတောင်စားစေတီကို ထပ်မံ တည်ထားခဲ့သည်။
ရှင်ဥသြစေတီတွင် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၆၅ ခုနှစ်က ထား၀ယ်မြို့၀န် ရာဇသင်္ကြံသမီးမောင်နှံ လှူဒါန်းခဲ့သည့် ကုန်းဘောင် ခေတ်ခေါင်းလောင်းတွင် ကမ္ဗည်းစာ ၁၃ ကြောင်းရေးထိုးထားသည်။ ရာဇသင်္ကြ ံသည် အမရပူရ ပထမမြို့တည် ဗဒုံမင်း၏ ငယ်ကျွန်ရင်း ဖြစ်ကာ ခေါင်းလောင်းစာကြောင်းရေ (၈) တွင် သာယာ၀တီ အမည်ရှိသော ဓား၀ယ်မြို့ဟု ရေးထိုးထားသဖြင့် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ထား၀ယ်ကို သာယာ၀တီဟုလည်း ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။ ရွှေကျောင်းကြီးအတွင်းဘက်တွင် နန်းဦးဘုရားဖြစ်သည့် ရှင်ဥသြ ဘွဲ့အမည်ရ ရုပ်ပွားတော်သည်လည်း ကိန်း၀ပ်စံပယ်လျှက်ရှိသည်.
လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ သာဂရ မြိုဟောင်းတွင်တည်ရှိသော ရှင်ဇလွန်စေတီတော်၏ ခေါင်းလောင်းပုံ အထက်ပိုင်းပတ်လည် တွင် ပုံဖော်ထားသည့် အင်္ဂတေပန်းကနုတ်များတွင် သိရိ၀စ္ဆပုံများပါရှိနေသဖြင့် ရှင်ဇလွန်ကို ပျူခေတ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်တည်ရှိခဲ့သည့် စေတီ ဟု ယူဆမှုများရှိခဲ့သည်။သာဂရမြို့ဟောင်း၊ အတွင်းအပြင် မြို့ရိုး၊ကျုံးနှင့်ပျူသင်္ချ ိုင်း(အရိုးအိုးကုန်း)တို့ကို ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားသည်။
ရသေ့ရှင်ဂေါဝိန္ဒ(တောမုဆိုးမောင်နွား)သည် လမ်းတွင်တွေ့ရှိကာ ကောက်ယူမွေးစား ခဲ့ သည့် လူမမယ်ကလေးနှစ်ယောက်အနက် မိန်းကလေးကို ရှင်ဇော၊ယောက်ျားလေးကို ရှင်ဇံဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ယင်းဒေသသို့ ရောက် ရှိခဲ့ သည့် ရဟန္တာတစ်ပါးက ဘုရားရှင်ဓာတ်တော်အစစ်တစ်ဆူကို ရှင်ဇံအားပေး၍ဓာတ်တော်ပွားတစ်ဆူကိုရှင်ဇောအားပေးခဲ့သည်။ ရှင်ဇောသည် သက္ကရာဇ် ၁၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဓာတ်တော်ပွားကိုဌာပနာ၍ ရှင်ဇလွန်စေတီကိုတည်ခဲ့ပြီး ရှင်ဇံက ဓာတ်တော်အစစ် ကို ဌာပနာလျက် ရှင်ဓာတ်ဝဲစေတီကိုတည်ခဲ့သည်။ ရှင်ဇလွန်သည် အမျိုးသမီးတည်ခဲ့သော စေတီဖြစ်သဖြင့် စေတီတော်ထီးတော်တင်ရာတွင်အမျိုးသမီးပါ၀င်မှအောင်မြင်သည်ဟုအယူရှိခဲ့သည်။
ရှင်ဇံတင်ခဲ့သည့် ရှင်ဓါတ်ဝဲစေတီသည်ထား၀ယ်ရေဖြူကားလမ်းမှခုနစ်မိုင်ဝေးသောမောင်မယ်ရှောင်ရွာတွင်တည်ရှိသည်။ရှင်ဇံသည်မိမိရရှိခဲ့သည့်ဓာတ်တော်ကိုဘုရားတင်ရန်အဓိဠာန်ဖြင့်ပြုလျှက်လေထဲသို့လွှင့်ခဲ့ရာယခုစေတီအနီးတွင်ပျံဝဲနေသဖြင့် ရှင်ဓာတ်ဝဲစေတီဟုအမည်တွင်ခဲ့ကြောင်း အစဉ်အဆက်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
တောင်ကြီးရောက်ပြီ ဘာစားရမလဲ Taunggyi ရောက်ပြီ ဘာစားရမလဲ
ခရီးသွားတယ် ဆိုတာ အိမ်မက် တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်တာနဲ့ တူတူပါပဲ
သင့်အိမ်မက်တွေကို ထပ်တူကျအောင် မက်ခွင့်ရဖို့ Discover Myanmar က သင့်အနားမှာ ရှိနေမှာပါ